डा. केदार कार्की इ.सं. १९९७ मा हङ्कङमा फेला परेको बर्डफ्लु इ.स. २०१३ मा सोह्रौँ वर्ष मनाउँदै छ । प्रत्येक वर्ष यसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न गाहो हँुदै गइरहेको स्थिति छ । हालसम्म ६० मुलुकमा फैलिएको यस रोगका कारण ३७७ जना मानिसले मृत्युवरण गरेका छन् । कुखुरातर्फ यस अवधिमा ५ देखि १० करोडसम्म यस रोगबाट सङ्क्रमण वा […]
यौनसम्बन्धमा चरमोत्कर्षको मूल कडी के ?
भिन्न भिन्न यौन रुझान भएका महिलाहरुमा चरमोत्कर्षको स्तर भिन्न हुने गर्दछ । कुनै ..
मोटोपनाको काल हो जिरा र कागतीको यो प्रयोग
जो मानिसहरु मोटोपनाबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि विभिन्न तरिका अपनाए..
विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहनुका यी १० कारण
विवाहपश्चात् अन्य व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्धमा पर्नुका कारण विभिन्न हुन सक्छन् । आ..
शिवरात्री विशेषः यी १२ पापलाई भगवान शिवले कहिले माफी दिँदैनन्
भगवान शिवलाई भोलेनाथ पनि भनिन्छ तर शिव जति ‘भोले’ (शान्त र सजिलै प्रसन्न हुने) द..
खेतीमा विषादी प्रयोगले गर्भवती र शिशुलाई क्यान्सर
बर्दिया – विषादी प्रयोग गरेको तरकारी तथा फलफूल सेवनले सबैभन्दा बढी असर गर्भवती महिलालाई हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विषादीको प्रयोगले गर्भवती महिला र नवजात शिशुमा नै क्यान्सर देखिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतले जानकारी दिएका छन् । महिलालाई क्यान्सर हुने, गर्भपतन हुनसक्ने, बच्चा अ..
काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा महिलाको स्तन र पाठेघरमा लाग्ने क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । अति महत्वकाङ्क्षी योजनाका रुपमा मन्त्रालयले यसका लागि आगामी बजेटमा रकम नै विनियोजन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यान्सर रोगी..
अब मौसम लगातार परिवर्तन भइरहेछ । चिसो मौसमबाट हामीले चाँडै नै गर्मीतिर लाग्दैछौं । अहिले बिहान बेलुका चिसो छ भने दिउँसो गर्मी भइसकेको छ । तर तपाईंलाई थाहा छ, यो परिवर्तन भइरहेको मौसम तपाईंको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ । परिवर्तन भइहरको मौसमका कारण शारिरिक स्थितीमा निकै परिवर्तन हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा यो परिवर..
क्यान्सर र उपचार भ्रम र यथार्थ : क्यान्सररोग विशेषज्ञ
क्यान्सरलाई एक भयावह रोगको रूपमा लिइन्छ । हाम्रोजस्तो स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेको तथा उपचारका पर्याप्त प्रविधि नभएको देशमा त क्यान्सर ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ । उपचार गर्दागर्दै धन पनि सकिने र ज्यान पनि जाने तितो यथार्थ भोग्नुपरेको अवस्था छ । तर, चुरोट र खैनी सेवन मात्रै छाड्ने हो भने नेपालीमा क्यान्सरको जोखिम धेरै कम हुने [&hell..
सुत्केरी आमाले ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा
प्रियंका विक, स्टाफ नर्स, उपक्षेत्रीय अस्पताल, डडेल्धुरा बच्चा जन्माएपछि ६ हप्तासम्मको अवधि सुत्केरी आमाका लागि संवेदनशील समय हो । यो समयमा सुत्केरी आमाले बच्चाको मात्रै होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि राम्रो ख्याल राख्नुपर्छ । कतिपय कमजोरीले आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्तिन सक्छ । यो संवेदनशील अवधिमा सुत्केरी आमाले ध्यान दिनुप..
पेनड्राइभमाफाइल लुक्यो ? निकाल्नुहोस् यसरी
युवराज भट्टराई, कम्प्युटर टेक्निसियन पेनड्राइभ या मेमोरी कार्डमा भएका फाइल कुनैवेला अकस्मात् गायब हुन्छन् । कम्प्युटरमा राखेर हेर्दा, हिडन फाइल भनेर देखाउँछ । पेनड्राइभ या मेमोरीमा फाइलले ओगटेको स्पेस देखाउने, तर फाइलचाहिँ नदेखिने समस्या खासगरी भाइरसले निम्त्याउँछ । यसबाहेक पेनड्राइभ र मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्ने क्रममा कहिलेकाही..
हेडफोनको चाहियो, यसरी छनोट यसरी गरौँ
हेडफोन अधिकांशले म्युजिक सुन्न प्रयोग गर्छन् । मोबाइल, ट्याब्लेटजस्ता ग्याजेटमा बढी प्रयोग हुने हेडफोनका विभिन्न मोडेल तथा ब्रान्ड बजारमा उपलब्ध छन् । यस्तोमा उत्कृष्ट हेडफोन छनोट गर्न समस्या हुन सक्छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार हेडफोन छनोट गर्ने तरिकाबारे अन्तरा इन्टरनेसनलका सुदीप रेग्मी यसो भन्छन्ः बजारमा निकै चलेको ओभर द इयर हेड..
आनन्दबाबु खड्का,कम्पनी सेक्रेटरी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स नेपालमा सवारीसाधनधनीहरू हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । योसँगै सवारी दुर्घटनामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । सवारी दुर्घटना हुँदा चालक, यात्रु तथा अन्य भौतिक क्षति हुने गर्छ । जसले गर्दा सवारीचालक तथा सवारीधनीले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सवारीधनीलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने यस्त..
तपाईंले सर्ट लगाउने नियम बारे त पढ्नुभएको होला तर के तपाईं सुट लगाउने नियमबारे जानकार हुनुहुन्छ ? निकै थोरै मानिसहरुले मात्र सुटलाई दैनिक लगाउने गर्दछन् । विशेषगरी यसलाई कुनै पार्टी, विवाह, अफिस वा औपचारिक कार्यक्रममा लगाइने गरिन्छ । यदि तपाईं वर्षमा एक पटक मात्र सुट लगाउनुहुन्छ भने पनि यहाँ बताइएका गल्ती नगर्नुहोस् । सुट र [&he..
डा. कुशल कार्की अपरेसन गरेपछि होस् या ओपीडीबाट फर्केपछि बिरामीले डाक्टरलाई के खानु हुन्छ, के खानु हुन्न भनेर प्रश्न सोध्ने गर्दछन् । यसै प्रश्नका आधारमा रोगको प्रकृति हेरेर डाक्टरले समाधन पनि दिने गर्दछन् । कुनै पनि रोगबाट बच्न अथवा फेरि त्यो रोग लाग्नबाट जोगिनका लागि खानाले पनि विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ । मिर्गौलाको पत्थरी हुने..
आजकाल ‘ग्रिन–टी’ पिउनु एक फेसन जस्तो बनेको छ । हुन त ग्रिन टीको साधारण चियाभन्दा निकै फाइदा छन् । यसले तौल घटाउनमा, हृदयलाई स्वस्थ राख्नमा, कपाल र छालालाई स्वस्थ राख्ने लगायतका फाइदा पुर्याउँछन् । तर गर्भावस्थामा ग्रिन टी पिउनु राम्रो हो वा होइन भन्ने विषयमा निकै विवाद हुने गरेको छ । हुन त गर्भावस्थामा ग्रिन […]